Tôtemisma - Wikipedia
Tsatokazo voasokitra atao tôtema any Ottawa, Ontario, Canada
Ny tôtemisma dia finoana ny fisian' ny razana na fanahy (mpiaro ny vondron' olona iray) izay mitoetra ao amin' ny atao hoe tôtema (izay mety zavatra voasokitra na biby na zavamaniry inoana fa manan-kasina). Lamin-kevitra sy famantarana ary fanao miorina amin' ny fifandraisan' ny olona na ny vondron' olona sy ny zavatra eny amin' ny zavaboary ny tôtemisma.
2 Ny tôtema
3 Petra-kevitra momba ny tôtemisma
Avy amin' ny teny amerindiana avaratra (fiteny ôjibaoa) hoe ototeman, izay manondro biby na zavamaniry na ny fanehoana an-tsary (hosodoko, sarivongana, sns) izany.
Na dia tany Amerika Avaratra aza no niavian' ny teny niforonan' ny hoe tôtemisma dia hita any ivelan' ity faritra ity koa io fomba io, ohatra amin' izany ny any Amazônia, ny any Aostralia, ny any Papoazia Ginea Vaovao, ny aty Afrika (ao amin' ireo Dinka), sns.
Ny tôtema[hanova | hanova ny fango]
Ny tôtema dia fanehoana am-panoharana ny razana na ny fanahy mpiaro ao amin' ny vondron' olona iray. Ity vondrona ity dia manam-pifandraisana ara-pinoana amin' ny biby masina, izay mpanome zava-tsoa sady miantoka ny firaisan' ilay vondrona. Any ivelan' i Afrika atsimon' i Sahara sy ivelan' i Ôseania, ny tôtemisma any amin' ny faritra avaratra-andrefan' i Amerika dia tanterahina amin' ny alalan' ny tsatokazo voasokitra sady misoratsoratra amin' ny loko maro, indrindra ao amin' ireo Tlingita any Alaska. Ireo sarim-biby mifanongoa voasokitra eny amin' ny hazo dia famantarana ny lohan' ny foko sy ny tarika ary ny fokom-pianakaviana misy azy.
Ny fifandraisana amin' ny alalan' ny tôtema dia matanjaka ao amin' ny Amerindiana sasany sy ao amin' ireo Tompon-tany aostraliana. Ao amin' ny fiarahamonina misy azy dia matetika heverina ho namana sy havana manana hery tsy araka ny mahazatra sady hajaina ary ivavahana ny tôtema. Ny olona ao amin' ny vondrona tompon' ny tôtema iray dia matetika mampitovy ny tenany amin' ilay tôtema, izay azo tondroina amin' ny anarana na famantarana manokana. Ny fitohitohizan' ny taranaka dia mety tafakatra hatrany amin' ny razana nahazoana ny tôtema tany am-boalohany, izay manjary famantarana an' ilay vondrona. Ankoatry ny fombafomba fanao amin' ny fikarakarana momba ny tôtema dia tsy azo atao ny mamono, ny mihinana na ny mikasika ilay tôtema. Ny samàna sasany dia milaza ho manam-pifandraisana mivantana sy maharitra amin' ny biby na zavamaniry atao tôtema.
Petra-kevitra momba ny tôtemisma[hanova | hanova ny fango]
Maro ny adihevitra momba ny atao hoe tôtemisma nifanaovan' ny mamam-pahaizana. Ny ankamaroan' ny rijan-kevitra (teôria) natolotra tamin' ny faha-19 sy tamin' ny fiantombohan' ny taonjato faha-20 dia voatsipaky ny mpikaroka taty aoriana. Taloha dia noheverina ho fivavahana ny tôtemisma, na, fara faharatsiny, ho endri-piandohàn' ny fanompoana ara-pivavahana, fa ankehitriny kosa dia heverina ho singan-kevitra ao amin' ny antrôpôlôjia, izay vokatry ny fisarahana araka epistemôlôjia sy tsy manam-pisiana azo tsapain-tanana. Eken' ny maro ankehitriny fa misy ny fifandraisana momba ny tôtema izay mety ahitana singa ara-pivavahana toy ny fivavahana amin' ny razana sy ny animisma, finoana ny fisian' ny fanahy.
Ankehitriny dia misy antrôpôlôga izay milaza fa ny tôtemisma aostraliana dia fomba fitahirizana izay ahafahan' ny olona mampifanaraka ny fiainany amin' ny tontolo voajanahary manodidina azy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tôtemisma&oldid=1010905"
Voaova farany tamin'ny 16 Aprily 2021 amin'ny 11:41 ity pejy ity.